Vidio ny vovobony choline CDP (987-78-0) hplc≥98% | Mpanome AASraw
/ Products / Nootropics vovoka / Vovoka choline CDP
Rating: SKU: 987-78-0. Sokajy: Nootropics vovoka
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny famokarana maimaimpoana amin'ny volavolan-tsarin'ny CDP choline poids (987-78-0), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
CDP video choline powder
Ny karazan-tsiran-tsolola CDP
Molekular lanja: 488.32
Vokatry ny choline CDP amin'ny fampiroboroboana ny atidoha sy ny fiakarana fanampiny
Anarana: CDP choline poids, citicholine, neurocoline
CDP choline Usage Usage
Ity fanampiana ity dia mikendry amin'ny fisorohana na fitsaboana ny fahatsapana fahatsiarovan-tena mifandraika amin'ny fahanterana noho ny fisian'ny molekiola roa napetrany dia ny fiakaran'ny neuroprotective ary mety hampitombo ny fianarana. Raha toa ka toa mahomby kokoa noho ny phosphatidylcholine (PC) amin'ity anjara andraikitra ity, amin'ny ampahany noho ny fampitomboana ny solosaina PC ao amin'ny atidoha, ny heriny dia azo oharina amin'ny Alpha-GPC.
Ny CDP-choline dia manana fampiasana hafa azo ampiasaina amin'ny fifandraisany amin'ny fahalalana. Matetika izy io dia ampiasaina ho fampitomboan'ny fahatsiarovan-tena amin'ny fahatanorana, saingy na eo aza ny fikarohana sasany dia manambara fa azo atao izany miaraka amin'ny CDL-choline am-bava, tsy misy fianarana olombelona amin'ny tanora amin'izao fotoana izao. Ny fianarana iray dia nanamarika ny fihenan'ny fisainana miaraka amin'ny CDP-choline ambany (izay tokony haverina kopiana) ary ny CDP-choline dia mety manana andraikitra amin'ny ady amin'ny fihanaky ny kôkainina ary manaporofo ihany koa ny fihinanana sakafo.
Satria azo atao ny mandefitra ny choline CDP, dia misy tahirin-tsakafo maromaro isan-karazany voarakitra an-tsoratra tsy misy ny fiantraikany ratsy. Ny dipoavatra isan'andro avy any amin'ny 250 ka hatramin'ny 1000 mg, na amin'ny dosie tokana na amin'ny dosie roa 8 ka hatramin'ny ora 12, dia heverina ho azo antoka sy mahomby.
Mahaliana fa ny fikarohana nataon'ny MIT dia mampiseho fa ny vokatry ny doka amin'ny 4000 mg dia tsy miavaka amin'ny an'ny dosage 2000 mg, izay toa manondro fa tsy misy vidiny amin'ny fandraisana dosie avo be.
Ny CDP choline dia misy amin'ny kapsula sy ny vovo. Votoatin'ny rano izy io, ary mihoatra ny 95% amin'ny doka am-bava no ateraky ny vatana.
Fampitandremana amin'ny vovobonin'ny choline CDP
Ny fisedrana ara-pitsaboana sy ny fikarohana dia maneho fa ny choline CDP dia tsy voamarina fa misy fiantraikany goavana, eny fa na dia avo be aza. Ny fitsapana ara-toekarena dia naneho fa tsy misy fiantraikany goavana eo amin'ny rafi-cholinergique izany ary azo itokisana tanteraka izy io, izay mampiavaka azy amin'ny fitsaboana aretina isan-karazany, traumas ary aretina.
Ny tsy firaharahiana, ny aretin'andoha, ny tsy fahitan-tory, ary ny aretim-pivalanana dia voatery notaterina fa mety hisy vokany hafa. Tsy misy fanadihadiana momba ny fiantraikany amin'ny vehivavy bevohoka dia efa vita, noho izany, ireo izay bevohoka na ny fampinonoana dia voatendry mba hisorohana ny fampiasana choline CPD.
Ny CDP choline dia fomba iray tsara indrindra ho an'ny fitsaboana fanampiny naotropic mpampiasa. Amin'ny alàlany manokana dia mampitombo ny fahatsapana fahatsiarovan-tena, fantatra amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovana sy ny fisorohana ny fahavoazana fahatsiarovana mifandraika amin'ny fahanterana, ny aretina ary ny ratra.
Manome hery bebe kokoa izy io, mifantoka tsara, ary misaina kokoa. Ao anatin'io nootropik hafa io dia potentiom-pahefana matanjaka izy, ary rehefa voapetraka miaraka amin'ny raketa manokana, dia miteraka vokatra synergista izay mampitombo ny fampitomboana ny lanjany amin'ny ambaratonga izay tsy misy ny fanampiana azo atao raha tsy misy ny hafa.
Ny fitsaboana amin'ny ankapobeny sy ny fianarana nandritra ny am-polo taona, dia naseho ho tena nilefitra loatra ny choline CDP, na dia avo be aza izany, na dia tsy ilaina loatra aza ny dosie mba hahazoana vokatra tsara. Tsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny sehatra hafa ary azo ekena ny fitsaboana any Eoropa sy Japon.
Ny CDP choline dia fanomezana fanampiny mora sy mora azo ary misy vokany mafimafy sy mitombo eo amin'ireo mpampiasa nootropic. Raha te-hahazo ny ankamaroan'ny stack nootropic ianao, ny CDP choline dia loharano choline mendrika miezaka.
(1) Miasa ve ny poezia vita amin'ny choline CDP?
Ny CDP Choline dia mihodinkodina ao Choline sy cytidine ao anaty tsinay, rehefa avy nivezivezy ny sakana amin'ny alàlan'ny Blood-Brain dia averina hiverina any amin'ny CDP Choline izay ampiasaina sy entina amin'ny alalan'ny Receptors Acetylcholine izay tafiditra ao anatin'ny fisainana sy ny fahatsiarovana. Ny tombontsoa azo avy amin'ny neuro vokatry ny CDP Choline dia mety vokatry ny fiarovana ny Cardiolipin sy Sphingomyelin. Ny soso-kevitra iray hafa dia ny fanentanana ny fampidirana glutathione. Ny CDP Choline koa dia manampy amin'ny fanatsarana ny famantarana ny mpitsabo maro toy ny acetylcholine, ny norepinephrine, ary ny dopamine.
Mbola maro ireo variables na dia tsy maintsy dinihina amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manaon'izy ireo aza. Vokatr'izany dia sarotra be ny mamaritra hoe ny fahombiazan'ny CDP Choline dia ho an'ny olona manokana. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny filàn'izy ireo manokana sy ny fahaiza-manaony amin'izao fotoana izao ary koa ny safidy ataon'izy ireo.
(2) FANAZAVANA SY NY HERY
Ny CDP choline dia fanampim-panafahana mahery vaika izay manatsara ny hafa nootropic ary miasa irery mba hampivoatra ny lafiny maro amin'ny fahalalana sy ny fahasalaman'ny atidoha:
• Fanamafisana ny fahatsiarovan-tena: Ny CDP Choline dia mety tsara indrindra noho ny fahaizany manatsara ny fahatsiarovana sy manakana ny fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena. Matetika izy io dia mifandraika amin'ny fahanterana ary nodinihina ho fitsaboana mety ho an'ny aretin'i Alzheimer.
• Fampitomboana ny angovo ara-tsaina: Manan-danja ho an'ny rehetra ny fitazonana ny hery ara-tsiansa, avy amin'ireo mpianatra miatrika fitsapam-pahaizana amin'ireo olon-dehibe izay mijaly noho ny fahantrana ara-tsaina izay matetika mifandray amin'ny fahanterana. Ny fitsaboana amin'ny klinika dia mampiseho fa ny CDP Choline dia manana fiantraikany tsara eo amin'ny hery ara-tsaina, mampitombo ny bioenergetics eo anoloana ary manamaivana ny fihenan'ny kognita mifandraika amin'ny fahanterana.
• Fifantohana tsara sy fifantohana: ny choline CDP dia afaka mampitombo ny fahafahana mifantoka mandritra ny fotoana lava izay tsy dia misy fanelingelenana kely akory, tena ilaina amin'ny fianarana, fananana fahaiza-manao vaovao, na fanatontosana asa sarotra sy sarotra. Ny fandinihana dia mampiseho fa marina izany na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza, anisan'izany ny fangejana, ny aretin'ny atidoha ary ny aretin'i Alzheimer.
• Manatsara sy mampitombo ny tsy fahasalaman'ny hafa: Maro ny mpampiasa nootropic no mihevitra fa ny choline CDP dia tsy maintsy manana azy amin'ny fananganana sehatra na fitambarana fanampiny. Ny loharano iray tena miavaka, io dia miasa tsara indrindra amin'ny classe racetam nootropics, izay mahatonga ny fiantraikany mahery kokoa ary manakana ny loha-dity tsy ampy kely izay indraindray mifandray amin'ny racetams. Naseho ny fanemorana ny fanombohan'ny fihenan'ny cognitive amin'ny aretin'ny Alzheimer rehefa ampiasaina miaraka amin'ny piracetam.
CDP Choline vovoka Marketing
Ahoana ny hividianana vovobony choline CDP avy any AASraw